Shiinaha kalluunka kalluumeysiga Peptides iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Peptides kalluunkawaxaa laga soo saaraa kalluunka badda. Waa wasakh la'aan-dhadhan fiican, oo saamaynteeda ayaa ka sii muuqata. Waxay hodan ku tahay nafaqada waxayna leedahay milmi sare xagga biyaha.
Peptides kalluunka dib u dhigi kara oo yareyn kara wax soo saarka maqaarka duuduubku, faa iidada u leh koritaanka maqaarka, isla markaana dayactiri kara isla markaana nafaqeyn kara maqaarka, waxayna sare u qaadi kartaa awooda unugyada maqaarka si ay uheystaan ​​biyaha, saliidaynta wanaagsan iyo uumiga maqaarka.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in xitaa qadar yar oo ah peptides-ka collagen ay gacan ka geysan karto kordhinta cufnaanta maqaarka, yareynta miisaanka iyo qallafsanaanta, daloolada maqaarka oo cidhiidhi ah, iyo xoojinta timaha.
Mid ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay kalluunka peptides-ka kalluunka si uu gacan uga geysto caafimaadka maqaarka ayaa ah in lagu bartilmaameedsan karo bartilmaameedyada unugyada.Waxaa la ogyahay in kolajka uu si dabiici ah ugu dhaco jirka bini'aadamka oo uu leeyahay halabuur u gaar ah amino acids, tiro aad u tiro badan oo ka mid ah waxay sameysan karaan xiriiro peptide xasilloon. bondsyadaani waa kuwa aad ugu adkeysanaya hoos u dhaca ku yimaada nidaamka dheef-shiidka
Sidaa darteed, marka afka lagaaga qaato kolejiin peptide, marka lagu daro amino acids lacag la'aan ah, gaagaaban, bioactive peptides ayaa laga nuugi karaa xiidmaha yar ee dhiiga. Waxay muujisay in kolajka loo yaqaan 'fluorescently' calaamadeysan uu si dhakhso leh u gaari karo unugyada bartilmaameedka ka dib nuugista, sida lafaha, kilyaha, unugyada muruqyada iyo unugyada maqaarka. Xitaa ka dib 14 maalmood oo maamulka ah, kolajka la calaamadeeyay ayaa lagu ogaan karaa unugyada maqaarka. sifooyinkaan iyo waxqabadka gaarka ah ee bayoolojiga ah, kolajka wuxuu hagaajin karaa gabowga maqaarka iyadoo la kordhinayo haynta qoyaanka maqaarka iyo cufnaanta kolajka ee maqaarka, iyo yareynta jajabka shabakada collagen ee maqaarka.
Ka sokow caawinta si loo yareeyo muuqaalka duuduubnaanta, peptides-ka kolajka ayaa sidoo kale kordhiya cufnaanta maqaarka maqaarka, kaas oo bixiya xoogga shabakadda maqaarka.
Hore: Bovine Collagen Peptides
Xiga: 2.5g Xaashida Gelatin